Thursday December 03, 2020 - 18:41:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa magaalada Baariis uga dhawaaqay wax uu ugu yeeray howlgalka ballaaran ee ka dhanka ah gooni ugoosatada oo uu ula jeedo jaaliyadda muslimiinta laga tirada badanyahay ee wadankaas ku dhaqan.
Xukuumadda saliibiyada ah ee Paris waxay sheegtay in howlgalkan uu beegsan doono inta badan masaajidda muslimiinta ee lagu faafo dacwada saxda ah ee islaamka.
Gérald Darmanin oo ah wasiirka daakhiliga ee xukuumadda Macron uu uxil saartay howlgalkan islaamka ladirirka ah wuxuu tibaaxay in 76 masjid ay xiri doonaan ayna dalka ka eryi doonaan kontomeeyo qof oo ku eedaysan in ay aaminsanyihiin wax ay gaaladu ugu yeereen islaamka xagjirka ah waxayna ula jeedaan dadka muslimiinta ah ee diiday in ay wax gorgortan ah ka galaan diinkooda.
Qoraal kooban oo uu bartiisa Twitterka soo dhigay ayuu wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ku yiri "iyadoo laga amba qaadayo amarka aan bixiyay ayay ciidamada ammaanka dowladda waxay sameynayaan dhaqaaq weyn oo ka dhan ah gooni ugoosatada" wuxuuna ula jeedaa dadka muslimiinta ah ee diinkooda ku dheggan.
Wuxuu intaas ku daray in ciidamada booliska ee utababaran ladagaallanka muslimiinta iyagoo eeyahooda wata ay gudaha ugeli doonaan 76 masjid oo kuyaal daafaha wadanka Faransiiska islamarkaana qaar badan oo kamid ah masaajiddaas ay albaabada isugu dhufan doonaan.
Sida ku cad macluumaadyo ay faafisay saxiifadda Le Figaro ee Faransiiska laga leeyahay 27-kii bishii lasoo dhaafay ee November ayay laamaha ammaanka wadankaas go'aamiyeen in laqaado howlgalkan ka dhanka ah masaajidda oo 16 kamid ah ay kuyaalaan magaalada Paris ee caasimadad ah halka 60-ka kale ay kuyaallaan wadanka intiisa kale.
Wararka ayaa intaas ku daraya in dowladda Saliibiyadda Faransiiska ay albaabada isugu dhufan doonto 18 kamid ah masaajidda bartilmaameedka ah waxaana xabsiyada loo taxaabi doonaa ama dalka laga eryi doonaan imaamyada masaajidda qaar iyo dadka kale ee duruusta ka akhrista.
Wakaaladda wararka faransiiska waxay sheegtay in 3 kamid ah 18-kaas masjid ee laxiri doono ay kuyaallan degmada siisaan-dooni qaarkoodna waxay si rasmi ah udiideen maamulladoodu in ay qaataan awaamirta dowladdu kusoo rogtay goobaha cibaabada muslimiinta waxaana awaamirtaas kamid ah in imaamyadu ay dadka masaajidda usoo cibaada tagaya u sheegaan in xuriyatul qowlku yahay wax sharci ah!.
dowladda Faransiiska ayaa doonaysa in muslimiinta ay diinkooda ka fitnayso iyadoo in nabiga lacaayo uga dhigaysa wax iska caadi ah, malaayiin muslimiin ah oo ku dhaqan faransiiska ayaa taageeray camaliyaadkii ay kaligood duulayaashii muslimiinta ay qudha uga jareen gaaladii caayay nabiga SCW.
Iclaaminta howlgalkan dhagarta ah wuxuu imaanayaa xilli maalinta arbacada ee soo socota lafilayo in ay kulan isugu yimaadaan golaha wasiirrada faransiiska waxaana lafilayaa in ay ku iclaamiyeen waxa loogu magac daray qaanuunka xoojinta jamhuuriyadda oo ah mid cadaadis hor leh gelinaya muslimiinta laga tirada badanyhay.
Emaniwal Macron madaxweynaha Faransiiska ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Fanancial Times ee laga leeyahay dalka Britain wuxuu ku sheegay in dalkiisu uu dagaal furan kula jiro wax uu ku sumadeeyay gooni ugoosato uu ula jeeday musliminta faransiiska ku dhaqan.
Dhinaca kale warbixin maanta kasoo baxday wasaarrada daakhiliga Faransiiska ayaa lagu sheegay in 66 qof oo muslimiin ah dibadda loo tarxay intii lagu gudaha jiray 45-tii maalmood ee lasoo dhaafay.
Warka ayaa intaas ku daraya in xabsiyo ammaankooda si aad ah loo ilaaliyo lagu hayo ugu yaraan 50 ruux muslimiin ah oo diiday in ay diinkooda wada xaajood ka galaan dhammaantoodna waa tarxiil sugayaal.
Faransiiska oo caan ku ah ladagaallanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa tallaabadan uu qaaday waxay imaanaysaa waqti malaayiin muslimiin ah ay daafaha caalamka kasii wadaan olole ay ku qaadacayaan badeecadaha uu faransiisku soo saaro.
Ciidanka Faransiiska oo 20 qof shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday dalka Maali.